Ragga Oo Beentaan U Sheega Haweenka - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Ragga Oo Beentaan U Sheega Haweenka
Aayaha editor Send an email August 23, 2019
Haweenka been way sheegaan, sax, sida ragga oo kale. mararka qaar way adkaataa inaad ogaato haddii ninkaagu kuu sheegayo been iyo haddii kale.
Hoos ka akhriso qaar kamid ah beenta ragga ay u sheegaan haweenka.
Indho aan adiga ahayn malihi
Marka nin uu rabo in gacalisadiisa uu kalsooni dareensiiyo wuxuu ugu qubeynayaa ereyo macaan oo ay kamid yihiin “ indho aan adiga ahayn malihi” si kastba, xaqiiqda ayaa ah in ragga aysan u babac dhigi Karin quruxda dumarka soo jiidashada leh.
Marka haweeney qurxan ay ag marto,nin wuxuu bilaabayaa in si hoose uu isha ula raaco. Haddii nin uu billaabo inuu gabdho kale kula barbar dhigo, isha ku haay oo noqo qof feejigan maadaama arrintaan ay dhibaato u keeni karto guurka.
Ma sugi karo inaan la kulmo waalidiintaada
Marka xiriirku noqdo mid koraya, waa wax caadiya in ninka uu bilaabo ka hadlidda la kulanka waalidiintaada.
Qaarkood marka ay kuu sheegaan daacad ayay ka tahay waxay rabaan inay la kulmaan waalidiintaada.
Si kastaba ha noqotee, waa inaadan warkaas si dhab ah u qaadan sababtoo ah waxaa jiraan rag badan oo ay been ka tahay balse doonaya inay adiga ku farxad geliyaan.
Waligeey been kuuma sheegin
Qof kasta ayaa been sheega. Gabar ahaan, Waa inaad had iyo jeer ku dadaashaa sidii aad u garan lahayd beenta ninkaagu kuu sheegayo.
Ragga been way sheegayaan si ay iskaga ilaaliyaan inay idin dhaawacaan. Guud ahaan ragga been way sheegi karaan. Waxaa suurtagal ah inuu kaaga been sheegay in waalidiintiisa ay aad kuu jecelyihiin isla markaana ay rabaan inay la kulmaan gabadha ay sodohda u yihiin.
Waxaa tahay gabadha ugu quruxda badan ee aan waligeey la kulmo
Waa sax waad qurxantahay, soo jiidasho ayaad leedahay waana shidantahay balse been ayuu sheegayaa marka uu kuu sheego inaad tahay gabadha ugu quruxda badan ee uu waligiis la kulmay.
Way iska cadahay in ninkaagu la kulmay daraasiin hablo ah oo qaarkood qurux badanyihiin.